The Belmont Report rụrụ ụka na ụkpụrụ nke Nkwanye Ùgwù maka Persons mejupụtara abụọ dị iche iche: (1) ndị mmadụ n'otu n'otu ga-emeso dị ka kwurula na (2) ndị mmadụ n'otu n'otu na e belata obodo kwụụrụ ga-eru inweta ọzọ nchebe. Obodo kwụụrụ Olee ihe enyemaka kwekọrọ na ime ka ndị mmadụ ịchịkwa ndụ ha. Yabụ, Nkwanye Ùgwù maka Persons-atụ aro na-eme nnyocha na-ekwesịghị ime stof ka ndị na-enweghị nkwenye ha. Critically, nke a na-esetịpụ ọbụna ma ọ bụrụ na-eme nchọpụta na-eche na ihe a nke na-eme bụ adịghị njọ ma ọ bụ ọbụna bara uru. Akwanyere Persons-eduga ná echiche na sonyere-agaghị na-eme nnyocha-esi na-ekpebi.
Na omume, ụkpụrụ nke Nkwanye Ùgwù maka Persons e kọrọ isi nrọ ahụ pụtara na-eme nnyocha kwesịrị, ma ọ bụrụ na o kwere omume, na-enweta ụbụrụ bụ site sonyere. The echiche bụ isi na ụbụrụ bụ bụ na sonyere kwesịrị isi na-na mkpa ozi na a ighota format na mgbe ahụ kwesịrị n'afọ ofufo ekweta na-ekere òkè. Onye ọ bụla n'ime usoro ndị a ka ya onwe ya kemgbe isiokwu nke ọkpụrụkpụ ọzọ arụmụka na mfọn (Manson and O'Neill 2007) , na Aga m etinye niile dị n'otu nkebi mgbe e mesịrị ke ibuot emi ka ụbụrụ bụ.
Ime ihe e Nkwanye Ùgwù maka Persons ka ihe atụ atọ site ná mmalite nke isiakwụkwọ ẹkenemede ebe nke nchegbu na onye ọ bụla n'ime ha. Na nke ọ bụla, na-eme nnyocha mee ihe iji sonyere-eji ha data (Ire, Ties, ma ọ bụ Time), na-eji ha na kọmputa ịrụ a mmesho ọrụ (encore), ma ọ bụ debara aha ha na nnwale (mmetụta uche Contagion) -o nweghị nkwenye ha ma ọ bụ mmata . The mebiri nke ụkpụrụ nke Nkwanye Ùgwù maka Persons adịghị na-akpaghị aka eme ka ndị a ọmụmụ ethically impermissible; Akwanyere Persons bụ otu n'ime anọ ụkpụrụ. Ma,-eche echiche banyere Nkwanye Ùgwù maka Persons-eme na-atụ aro ụzọ ụfọdụ ndị ọmụmụ a pụrụ imeziwanye emeziwanye ethically. Dị ka ihe atụ, na-eme nnyocha nwere ike nwetara ụdị ụfọdụ nke nkwenye n'aka sonyere tupu ọmụmụ malitere ma ọ bụ mgbe ọ kwụsịrị; M ga-alaghachi ndị a nhọrọ mgbe m atụle ụbụrụ bụ n'uju n'okpuru. N'ikpeazụ, research ethicists mesie ya ike na nchegbu banyere emebi ndị mmadụ nnwere onwe bilie ọbụna na ihe banyere kpamkpam benign ọmụmụ. Nchegbu banyere Harms na ihe ize ndụ ndammana tinye usoro ziri ezi echiche, ma ha na--elekwasịkarị n'okpuru ụkpụrụ nke Beneficence, ụkpụrụ na m ndikwọrọ.